Torrent | October 2019
YouTube ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံ mode ကို off
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု October 16,2019
အတော်များများကအင်တာနက်အသုံးပြုသူအသုံးဝင်သောဖိုင်တွေအမျိုးမျိုးကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်က BitTorrent နည်းပညာကို အသုံးပြု. ရသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ထဲကသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ပါသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် torrent-client ကိုနားလည်, ရှိသမျှစည်းကမ်းချက်များသိတယ်။ ထိထိရောက်ရောက်အနည်းဆုံးအဓိကရှုထောင့်တစ်နည်းနည်းနားလည်မှုသင်လိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့အမိန့်ပါ။
Addressing ကို download "မှားယွင်းစွာ coded torrent"
အတော်များများကအသုံးပြုသူများ torrent client ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါပေါ်ထွန်းကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှားများနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကို၏လှိုင်းတံပိုး၏ torrent ။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကသိသာဖြစ်ကြပြီးအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ပေမယ့်တချို့အားထုတ်မှု, အချိန်နှင့်အာရုံကြောလိုအပ်သည်။ ဒါဟာလုပ်နိုင်နှင့်ပြဿနာအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့ဘာမှမတှေ့နိုငျသူအစပြုသူ orientation ဖို့အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်။
မှားယွင်းနေသည်ဖြေရှင်းချက် torrent-client ကို "disk ကိုမှရေးပါ။ Access ကိုငြင်းဆိုနေသည်"
အခြို့သောရှားပါးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူ torrent-client ကို "disk ကိုမှရေးပါ။ Access ကိုငြင်းဆိုသည်။ " မှားယွင်းမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရစေခြင်းငှါ ခြောငျး program ကိုသင့် hard drive ကိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့အခါဒီပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်အချို့အတားအဆီးရင်ဆိုင်နေရသည်။ 2% - ထိုသို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုတင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1% ရပ်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကိုမကြာခဏ torrent-အစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်သူများသည်အသုံးပြုသူများသည်။ အများအားဖြင့်, ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အစပြုဘို့, ကယုတ္တိထက်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအတွက်အများကြီးပိုလွယ်သည်။ အဆုံးစွန်သော - ပိုခက်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်အမှားများကို torrent client ကို fix မှအတိအကျသိနိုငျသညျ။
မှားယွင်းနေသည်ဖြေရှင်းချက် torrent-client ကို "ကြိုတင်ကြောင်းမှမတပ်ဆင်ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်"
Torrent ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်တွေ့မှအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ သို့သော်အပြုသဘောနှစ်ဖက်နှင့်အတူ လာ. အနုတ်လက္ခဏာ။ ဥပမာ, အမှားအရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့မတိုင်မီသောကွောငျ့, ရပ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူထားစေခြင်းငှါ "ဒီရှေ့တပ်ဆင်ထားမထားဘူး" ။ ဤပြဿနာကိုဖွင့်ဘယ်နေရာမှာထဲကဖြစ်ပေါ်မထားဘူး။
က BitTorrent နည်းပညာကိုအခိုငျအမာများစွာသောလူများ၏ဘဝ၌တည်ရှိ၏။ ယနေ့တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏သို့မဟုတ်ပင်သန်းပေါင်းများစွာသောပူဇော်ထားတဲ့ torrent-ခြေရာခံ, တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ ရုပ်ရှင်များ, ဂီတ, စာအုပ်များနှင့်ဂိမ်းများယောက်ျားသည်လိုလားတဲ့သူကိုလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာ pluses နှင့် minuses ။
Torrent-client ကိုဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါနှင့် "ရွယ်တူချင်းမှ connection ကို" ရေးသားခဲ့သည်ပါဘူး
Torrent-client များ - comfy အပေါင်းတို့နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးအစီအစဉ်များ။ သို့သော်တဦးတည်းမှာအခြို့တို့ကလွှဲခြင်းနှင့်အတောမသတ်ရေးမရှိတော့များမှာ "ရွယ်တူချင်းမှ connection ကို။ " သမျှသင်ပြုလျက်, အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော download, အဘယ်သူမျှမ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာဗားရှင်းဒီနှောင့်အယှက်ပြဿနာကိုလည်းလုံလောက် fix ။ ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းနိုင်တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်, ဖြစ်ကောင်း, ရှေ့ဆက်အချိန်စိတ်မပူပါနဲ့နှင့်ထိတ်လန့်ကြပါဘူး။
ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းလို့ Torrent-client ကိုတိုးပွါး
က BitTorrent protocol ကိုအသုံးပြုသူများအကြားဖိုင်တွေကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာလွှဲပြောင်းဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့၏ပိုင်ထိုက်သောဒေါင်းလုဒ်အပြည့်အဝဝန်တစ်ခုတည်းဖိုင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အခြားအသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာကနေတိုက်ရိုက်ဆာဗာသည်မဟုတ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Torrent-client ကို၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များမှုနှင့်အတူအသီးအသီးအသုံးပြုသူပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ဤအထဲမှတစ်ဦးကိုပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်များ၏မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်သင်ပထမဦးဆုံးကပေါ်လာနိုင်ပုံကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ဒါ, များစွာသောစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူ၏တာဝန်ရိုးရှင်းများနှင့်အချိန်အများကြီးသိမ်းဆည်းပါ။
လက်ရှိလို့ Torrent-client များပေါ့ပါးပြီး, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို, အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်တာမဟုတ်ဝန်ကွန်ပျူတာဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအချို့အနုတ်လက္ခဏာများမှာ - ကြော်ငြာ။ တစ်ခုမှာသူမအသုံးပြုသူများအနှောင့်အယှက်များနှင့်အခြားအလွန်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ developer များသူတို့ကသူ့အလုပ်အတွက်ပေးဆပ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခြေလှမ်းကိုယူမယ့်နေကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကြော်ငြာမပါဘဲအတူတူ torrent အစီအစဉ်များကိုဗားရှင်းရှိပါတယ်ပေးဆောင်နေကြပါတယ်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် torrent-client ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Torrent-client ကို - အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ဖိုင်များကိုဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အစီအစဉ်ကို။ လိုချင်သောရုပ်ရှင်, ဂိမ်းသို့မဟုတ်ဂီတကိုအောင်မြင်စွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, သင် client ကို PC မှာ install နှင့်အထူး tracker ထံမှယူလိုချင်သော torrent ဖိုင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးသောဘာမှလိုပဲ, ဒါပေမယ့်တစ်အစပြုဘို့ကသူယခင်ကက BitTorrent နည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ဖူးအထူးသဖြင့်အခါ, နားလည်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
https://termotools.com my.termotools.com © Torrent 2019